Madaxweyne Gaas ” Uma Baahnin Ciidamo AMISOM Ah” – SBC
Madaxweyne Gaas ” Uma Baahnin Ciidamo AMISOM Ah”
Posted by SBC Editor on August 7, 2015 Comments
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo la hadlay wakaalada Wararka Reuters ayaa sheegay in maamulkiisa aanu u baahneyn Ciidamo ka socda AMISOM oo la geeyo deegaanada maamulkiisa ka arimiyo, isagoo xusay in ciidankiisa awood u leeyihiin la dagaalanka Al-Shabaab.
M/weyne Gaas waxaa uu ku eedaynayaa Midawga Africa inaysan waligood maamulkiisa ku taageerin dagaalka ay kula jiraan Al-Shababka ku sugan gobolka Bari gaar ahaan buuraha Galgala sida uu yiri.
“Ciidamada AMISOM waligeen wax gacan ah kama helin dawlada Soomaaliya kaliya ayay dagaalka ku taageeraan dawlada Soomaaliya taasna ma aha wax sax ah oo cadaalad ah” ayuu ku yiri waraysiga uu M/weynaha Puntland siiyay wakaaladda Reuters.
Mar wax laga weydiiyay inay u baahan yihiin ciidamo midawga Africa ka socda in degaanada Puntland la geeyo waxaa uu yiri.
“Maya uma baahnin ciidamo AMISOM ah annagaa awood u leh bur burinta Al-Shabab laakiin waxaan midawga Africa uga baahanahay waa taageero dhanka ciidamada ah”.
Illaa saddex kun askari ayuu qorshuhu yahay in Puntland ay ku biiriso ciidamo la isku dhafayo oo la doonayo in la qarameeyo, ciidamadaas oo dhaqaalahooda ay bixineyso dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Halkaan Riix Si Aad U Akhrisato Wareysiga Lala yeeshay madaxweynaha: